वीरगंजलाई राजधानी बनाउन संघर्ष समिति गठन गर्ने - Rato Pana
वीरगंजलाई राजधानी बनाउन संघर्ष समिति गठन गर्ने
by ratopana ५ माघ २०७८, बुधबार 0
वीरगंज । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर तोकिएपछि वीरगंजलाई राजधानी बनाउन संघर्ष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । बुधबार बिहान वीरगंजमा बसेको चार राजनितिक दलको संयुक्त बैठकले वीरगंजलाई राजधानी बनाउन संघर्ष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नगर सभा गृहमा बसेकाे बैठकमा नेपाली कांग्रेसका वीरगंज महानगर अध्यक्ष भोला कलवार, लाेसपाका नेता राजेशमान सिंह, मुकेश द्विवेदी, नेकपा एमाले वीरगंज महानगरका सचिव सुन्दर कुर्मी, नेकपा एस महानगरका अध्यक्ष मनोज चौधरी, सचिव वृजलाल पासवान, अधिवक्ता पानालाल गुप्ता लगायतकाे बैठकलले वीरगंज राजधानी बनाउनका लागि संघर्षको कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेकाे लोसपाका नेता सुजित गीरिले जानकारी दिए ।
बैठकमा वीरगंज प्रदेशको राजधानी बनाउनका लागी विभिन्न आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने र ५ बजे घण्टाघर चोकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पुत्ला दहन गर्ने निर्णय भएको गिरीले बताए । सोमबार जनकपुरलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएपछि पर्सामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको लगातार पुत्ला दहन हुँदै आएको छ ।
खोप लगाएको कार्ड हराएमा के गर्ने ?
बढ्दै गएको सङ्क्रमण रोकथाम गर्न जिप्रका पर्साको आदेश ।
बिगबास लिग : सन्दीप आबद्ध होबर्ट हरिकेन्सको लगातार दोस्रो जित
ratopana December 13, 2020
जनगणना गर्दा तपाईंलाई के–के सोधिन्छ ?
ratopana November 12, 2021
गण्डकीमा थप दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु
मुलुकभर थप ३७७ जनामा कोरोना पुष्टि, ४ जनाको मृत्यु
ratopana November 16, 2021